Shirkadda Isgaarsiinta Golis oo Adeegga TAAJ iyo Adeegya kale kusoo Bandhigtay Magaaladda Badhan[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Shirkadda Isgaarsiinta Golis oo Adeegga TAAJ iyo Adeegya kale kusoo Bandhigtay Magaaladda Badhan[Sawirro]
Shirkadda Isgaarsiinta ee Golis Telecom ayaa degmada Badhan ee gobolka Sanaag kusoo bandhigtay Adeega Taaj iyo adeegyo kale oo muhiim ah sida Adeega Natiijada Imtixaanaadka lagu ogaado,adeega Web Interface oo lagala socdo dhaqdhaqaaqa Akoomada.
Adeega xawaaladda TAAJ ayaa u fududaynaya macmiilka in eheladiisa asxaabtiisa iyo dadka wadashaqayntu ay ka dhaxayso meel walba oo ay joogaan ay lacagta ugu soo diraan taleefankiisa Goliska isagoo isla markaba helaya fariin u sheegaysa inay lacag u soo dhacday.
Madaxa Suuqgeynta Shirkadda Golis Cabdiraxmaan Cabdullaahi Jaamac (Dayax) ayaa u sharaxay ka qeybgalayaashii madasha Adeegyada kala duwan ay Shirkadu soo bandhigtay ee kala ah E-Deposit, SAHAL Interface, Video Call, AutoBank Deposit.
Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Jaamac oo sharaxay Adeegyada ayaa sheegay in Adeegga E-Deposit uu kuu suurta gelinayo in aad qof kasta akoonkiisa ugu deposit garayn karto lacagta aad u dirayso si lacag la’aan ah.
Sidoo kalena Addeega SAHAL Interface yahay mid macaamiisha u suurtagelinaya iney Bogga SAHAL ee Merchant-ga kala socon karaan dhaqdhaqaayadooda kana dirsan karan lacagaha iyo Mushaharooyinka,sidoo kalena ka dirsan karaan Xawaaladda Taaj dal iyo dibadba.
Guddoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Ismaaciil Ciyoon oo Xafladda daahfurka Adeegyada hadal kasoo jeediyey ayaa sheegay in marka hore u mahadcelinayaan Madaxda Shirkadda isla markaana Adeegyada yihiin kuwa si weyn loogu baahna.
Dhammaan dadkii ka qeybgalay Xafladda daahfurkan Adeegyadan oo ugu weynyahay Adeegga Taaj oo hadalka la siiyey ayaa isku raacay in Adeegyadan yihiin kuwa si weyn ugu baahnaayeen ugana mahadcelinayaan Shirkadda Golis.